धुलिखेलमा ६५ पार्क बन्दै, सेनाको ब्यारेक सारिने :: शान्ति तामाङ :: Setopati
धुलिखेल, चैत ८
विवेक राई धुलिखेल, चैत ८
एउटा नगरपालिकाभित्र कतिवटा पार्क होलान्?
पाँच, दस वा बीस।
काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाले ६५ वटा पार्क बनाउने लक्ष्य रोखेको छ।
नगरपालिकामा १२ वडा छन्। प्रत्येक वडामा हरेक वर्ष एउटाका दरले पाँच वर्षभित्र ६० वटा पार्क बनाउने नगरपालिकाको योजना छ। यसबाहेक थप पाँचवटा नगरस्तरीय पार्क बन्नेछन्।
योजनाअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा ११ वटा वडाले एउटा-एउटा पार्क निर्माण गरिसकेका छन् भने एउटा नगरपालिका स्तरको पार्क पनि बनेको छ।
नगरपालिकाले १२ वटै वडालाई पार्क बनाउन तीन-तीन लाख रूपैयाँ दिएको थियो। एउटा वडामा अध्यक्षको निधन भएकाले बन्न सकेन। उनकै सम्झनामा राजन कोइराला स्मृति पार्क निर्माण सुरु गरिएको छ। थप छवटा निर्माण क्रममा छन्।
बढ्दो सहरीकरणले खुला सार्वजनिक स्थल मासिँदै गएका बेला धुलिखेलको पार्क अभियान अन्य नगरपालिकाका लागि उदाहरणीय बन्न सक्छ।
‘धुलिखेललाई पर्यटकीय नगर बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो,' धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले सेतोपाटीसँग भने, 'हामी धुलिखेल घुम्न आउनेहरूलाई प्रशस्त खुला स्थल भएको सफासुग्घर सहर अनुभव गराउन चाहन्छौं।'
यो पार्क अभियान धुलिखेललाई वातावरणमैत्री सहर बनाउने योजनाबाट सुरू भएको हो।
यसका लागि बोटबिरूवासहितको खुला स्थल महत्वपूर्ण हुने देखेर प्रत्येक वर्ष एउटा वडास्तरीय र एउटा नगरस्तरीय पार्क बनाउने योजना कार्यान्वयन गरिएको उनले जानकारी दिए।
पार्क अभियान सुरू भएपछि टोल-टोलमा फोहोर थुपार्ने 'डम्पिङ साइट' बनेका साना-ठूला सार्वजनिक जग्गा सफासुग्घर गरिएका छन्। बोटबिरुवा रोपिएको छ। केहीमा दुबो लगाइएको छ। मेचहरू राखिएका छन्। ती पार्कमा साँझ-बिहान स्थानीय जमघट गरेर गफिन थालेका छन्।
नगरस्तरीय सरस्वती पार्क निर्माणको काम लगभग पूरा भएको छ। देवीस्थान डाँडामा देवीस्थान पार्क बनाउन अर्को महिना टेन्डर आह्वान गरिँदैछ। यसको लागत चार करोड हुनेछ।
जिल्ला वन कार्यालयसँग मिलेर ५० लाख रूपैयाँ लागतको टुँडिखेल पार्क पनि निर्माण क्रममा छ। यसका लागि नगरपालिकाले ३० लाख छुट्याएको छ।
धुलिखेलमा नवनिर्मित पार्क। तस्बिर: विवेक राई/सेतोपाटी
टुँडिखेलनजिकै पुरानो 'पिकनिक स्पट' लाई धुलिखेल मनोरञ्जन पार्क बनाउन नगरपालिकाले 'मास्टरप्लान' तयार पारेको छ।
एक सय ३२ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको यो पार्कको केही भाग धुलिखेल ब्यारेकले ओगटेको छ। नगरपालिकाले उक्त ब्यारेक सार्ने निर्णय गरेको छ। ब्यारेकको निम्ति नयाँ ठाउँ खोजी भइसकेको नगर प्रमुख ब्याञ्जुले जानकारी दिए।
त्यस्तै, धुलिखेल पार्क निम्ति २२ लाख रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको छ। यसबाट शौचालय र पानीको फाउन्टेन निर्माण गरिएको छ। यो वर्षका लागि थप ३० लाख छुट्याइएको छ।
यसबाहेक पृथ्वीनारायण शाहका नाममा शालिकसहित पार्क बनाइँदैछ। अर्का एेतिहासिक पात्र बलभद्र कुँवरका नाममा पनि पार्क बन्दैछ। काभ्रेमै जन्मिएका लेखक गुरुप्रसाद मैनालीका नाममा पनि पार्क बनाउने योजना छ।
'हामी इतिहासमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरूको स्मरणमा पार्क बनाउँदैछौं। यसले भावी पुस्तालाई यी एेतिहासिक पात्र स्मरण गराउनेछ,’ प्रमुख ब्याञ्जुले भने।
उनका अनुसार यी पार्क वातावरणमैत्री, बालमैत्री, युवा र वृद्धवृद्धामैत्री हुनेछन्। यहाँ बालबालिका निम्ति खेलकुद सामग्री राखिनेछ। नि:शुल्क शारीरिक व्यायामको निम्ति फिटनेसका मेसिन पनि जडान गरिनेछ।
सबै पार्क शारीरिक अपांगतामैत्री हुने उनले बताए।
‘संसारका विकसित देशमा पार्क, म्युजियम, अनुसन्धान केन्द्रहरू बनेका छन्। त्यहाँ सबैलाई सहज रूपमा घुम्ने, खेल्ने, मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ छन्,’ उनले भने, ‘हामीले अरू देशको अनुभव र आफ्नो आवश्यकता हेरेर पार्क बनाउने निर्णय गरेका हौं।'
नगरपालिकासँग ३२ प्रतिशत जमिनमा हरियाली जंगल छ। पाखा क्षेत्र गरेर ४२ प्रतिशत पुग्छ। थप हरियालीका लागि वृक्षारोपण गर्ने नगरको योजना छ।
नगरभित्र तीन हजार ठाउँमा साना-ठूला सार्वजनिक जग्गा छन्। सार्वजनिक, पर्ती, खाली र बाँझो जग्गा प्रयोग गरेर नगरपालिकाले पार्क निर्माण गरिरहेको छ।
पार्क निर्माण गर्न अहिलेसम्म नगरकै बजेटले पुगेको छ। संघ र प्रदेश सरकासँग पनि समन्वय गरिँदैछ। यसका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड रूपैयाँ दिएको छ। निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर काम गर्ने योजना रहेको प्रमुख ब्याञ्जुले बताए।
‘नगरको बजेटबाटै हामीले अहिलेसम्म पार्क निर्माण गरेका हौं। प्रदेश र संघ सरकारसँग मिलेर पनि निर्माण गर्छौं। यसका लागि यो वर्ष प्रदेश सरकारबाट एक करोड बजेट आएको छ। हामी निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीअन्तर्गत यहाँका होटल व्यवसायीसँग मिलेर काम गर्दैछौं,' उनले भने।
धुलिखेलको भगिनी सम्बन्ध रहेको कोरियाको नगरपालिकासँग मिलेर कोरिया-नेपाल मैत्री पार्क बनाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नगरस्तरीय ठूला पार्क बनाउन टेन्डर आह्वान गरिएको छ भने वडास्तरीय पार्कमा उपभोक्ता समितिमार्फत् काम भइरहेको छ। यसमा स्थानीयले नै रोजगार पाएका छन्।
पार्क निर्माण मात्र होइन, संरक्षणमा पनि नगरपालिकाले ध्यान दिएको छ। नगरभित्र ५७ वटा टोल विकास समिति गठन भएका छन्। ती समितिलाई नै पार्क व्यवस्थापनमा लगाउने योजना छ।
‘टोल-टोलमा गठन भएका उपभोक्ता समितिलाई पार्क व्यवस्थापन गर्न दिने हो। हामी ती समितिसँग समन्वय गरेर काम गर्छौं। जुन ठाउँमा पार्क बनाउँछौं, त्यहाँकै समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न दिन्छौं,' उनले भने, 'टोल विकास समितिलाई नगरको तल्लो तहका अंगका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।'
नगरपालिकाले वडास्तरीय पार्कमा शुल्क नउठाए पनि नगरस्तरीय ठूला पार्क भ्रमण गर्न शुल्क लिने योजना बनाएको छ। त्यो शुल्क उपभोक्ता समितिले नै चलाउने र पार्क व्यवस्थापनमा खर्च गर्नेछ।
निर्वाचित भएको दोस्रो आर्थिक वर्ष पनि सकिन लागेको अवस्थामा ६५ पार्क निर्माण कत्तिको सम्भव छ?
‘नगरपालिकाको पार्क निर्माण गर्ने मिसन हो। हामीसँग यो आर्थिक वर्षको पाँच महिना बाँकी छ। त्यसैले भनेकै समयमा पार्क निर्माण पूरा गर्छौं,' उनले भने, 'हामीले तय गरेको संख्या घट्दैन, बरू बढ्छ।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ८, २०७५, २१:१५:००
थप दुई साता अष्ट्रेलियाको सीमा नखुल्ने
नगरपालिकाले बाँड्यो जेष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा
सिन्धुलीको एक गोदाममा भीषण आगलागी
अन्टार्टिकामा पहिलो पटक एयरबस ए ३४० जहाज अवतरण (भिडिओ)
भ्रम नारायण कोइराला